လမ်းဘေးဆိုင် ၊ လမ်းဘေးကား နဲ့ လမ်းဘေးလူ (၃) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » လမ်းဘေးဆိုင် ၊ လမ်းဘေးကား နဲ့ လမ်းဘေးလူ (၃)
လမ်းဘေးဆိုင် ၊ လမ်းဘေးကား နဲ့ လမ်းဘေးလူ (၃)
Posted by ဦးဦးပါလေရာ on Jun 6, 2011 in Society & Lifestyle |9comments
1989 နောက်ပိုင်းမှာတော့ နိုင်ငံရဲ့ အုပ်ချုပ်မှု့ကလဲ ပုံစံအသစ် ၊ ဌာနများစွာ ခွဲထုတ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်ကလဲ ဖွဲ့စည်းပုံအသစ် ၊ ပြီးတော့ တပ်မတော်အရာရှိတွေကို အထက်ပိုင်းရာထူးတွေမှာ ထိုးထည့်လိုက်လို့ လူ( ကြီး ) တွေကလဲ အသစ်တွေပေါ့။
အရင်ကလဲ အဲဒီနေရာမျိုးတွေမှာ မဆလ ပါတီကေဒါတွေချည်းပဲဥစ္စာ ဘာထူးမှာလဲလို့ ထင်စရာရှိတယ်။
ထူးတယ် ။ အခုဟာက အကိုကြီးနဲ့ ညီလေး တွေလေ ။ သိတယ်နော် ။ အထက်အောက် ဘယ်အပတ်စဉ်တွေဆိုတဲ့ကြိုးနဲ့ အိုးမဲသုတ် စုချည်ထားပြီး တခြားလူတွေကြားမှာ သူတို့ချင်းမှ သူတို့ချင်း ။
(တကယ်တော့ – တခြားလူတွေမရှိရင်တော့ သူတို့ချင်းမှာလဲ သွေးအုပ်စု ၊ ကျောင်းအုပ်စု ၊ ဆရာတပြည့်အုပ်စု တွေနဲ့ ဟိုကျိတ်ကျိတ် ဒီကျိတ်ကျိတ်နဲ့ပါ ။ အဲဒီအကြောင်းလေး လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်လလောက်က
” ဘယ်သူမခွဲခွဲ ၊ ကိုယ့်ဖာသာခွဲ ၊ အမြဲဟက်တက်ကြီး ” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့
စာလေးတပုဒ်ရေးထားတာ ဘယ်ဆိုက်မှ မတင်ရသေးပါဘူး။ MG မှာတော့ ဆိုက်ကိုထိခိုက်မှာစိုးလို့ မတင်တော့ပါဘူး။ နောင်တချိန်ချိန် အဲဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ တနေရာရာမှာတွေ့ခဲ့ရင် အဲဒါ ဒီရွာက ပါလေရာဆိုတဲ့ ဂွစာကြီးလက်ချက်လို့ သိနိုင်ကြဖို့ပါပဲ။)
ကျုပ်တို့ မြန်မာ့သမိုင်းကြောင်းတလျှောက်မှာလဲ ” ငါကိုယ်တော်မြတ် ” များဟာ ” ချီးမြှင့် မြှောက်စားတော်မူ ” လွန်းအားကြီးပါပေတယ် ။ (အနှိပ်သည်ကို ရွာစားပေးတာမျိုးတွေ)
ချီးမြှင့် တဲ့အထိက ကျုပ်ဘာမှမပြောချင်သေးဘူး။ သူ့ဟာသူ ရွှေတုံးကြီးပေးပေး စိန်တုံးကြီးပေးပေး ဒါမှမဟုတ် ဖုံးတလုံး ဒေါ်လာခြောက်ထောင်တန်အောင် လုပ်ပြီးပဲ ပေးပေးပေါ့လေ ။
ဥပမာ – လက်သမားတယောက် တော်လို့ အကျိုးဆောင်လို့ချီးမြှောက်ချင်ရင် ဆုတွေပေးဗျာ၊ ဂုဏ်ပြုဗျာ၊ ဒီလောက်နဲ့မလောက်သေးရင် မဟာလက်သမားဆရာကြီးခန့်ဗျာ။
ဒါပေမယ့် လက်သမားလုပ်တာတော်လို့ ဆရာဝန်တော့မခန့်သင့်ဘူးပဲ ..။
အဲသလိုများ ခန့်လိုက်မိရင် ……
ဘာရောဂါတွေ့တွေ့ လွှနဲ့တိုက်ပြီး ရေပေါ်နဲ့ထိုး ဖို့ချည်း စဉ်းစားနေရင်မခက်လား …။
အဲဒါကြောင့် …… အခုလို …….. ခက်ကုန်တာပေါ့……….
(အကြိုခင်းကျင်းတာတွေပြီးပါပြီ ၊ နောက်တပိုင်းကစလို့ ပလက်ဖောင်းပေါ်ဆင်းပါမယ်)
ချစမ်းပါဗျ ဦးပါလေရာကြီးရ။ ဘယ်သူမျက်နှာ ထောက်နေရမှာလည်း၊ ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံပေါ့..
ရေးစရာရှိတာရေးပါဗျာ၊ သဂျီးကြောက်ရင် ပိတ်ပါလိမ့်မယ်။ သူ့ကိုလည်း နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သူ့ခင်မျာ မြန်မာပြည်မှာ နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာလေးများ ထုတ်ဝေခွင့်ရမလားဆိုပြီး လွှတ်တော်လွှတ်တော်နဲ့ ဖားလိုက်ရတာအမော။ ခုထိတော့ ဘာမှဖြစ်မလာသေးဘူး။ ကချင်ပြည်နယ် ဖက်သွား ကျောက်စိမ်းတူးဖို့တော့ ကြံနေပြီ။ သတိထားသဂျီးရေ…ကချင်သူပုန်တွေရဲ့ အာပီဂျီဗုံးသီးက သဂျီးသော ရွာသားသော မသိဘူး၊ ဆော်မှာပဲ…….
ဖတ်ချင်သူများ၏ ဆန္ဒကို လိုက်လျောသောအားဖြင့် ယခုကဲ့သို့ များများမကြာပဲ တင်ပေးသည်ကို ကျေးဇူးဥပကာရ အထူးတင်ရှိပါကြောင်း။
ဒါပေါ့ ဖြစ်သင့်တာထက် ဖြစ်ချင်တာတွေလုပ်နေတော့လည်း သြော် သူတို့လောကလေ…
MaMa ရေ ။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကိုယ်ပြောချင်တာလေးတွေ နားထောင်ပေးသူရှိတော့
Carry on Ko Parlaylar46. I love to read your article. I like to read it more. Go on.
တပိုင်း တပိုင်းမှာ နဲနဲတိုနေတယ်။ အားခဲပြီး ဖတ်တုန်းရှိသေးတယ် ပြီးပြီ ဆိုတော့ ……
ကြိုက်တယ် လုပ်ပါဦး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလေးတွေ